Akwụkwọ akụkọ ọhụụ: akụkọ ndụ, akụkọ ọdịnala na eserese nke ndụ | Bezzia
Akụkọ banyere akwụkwọ: akụkọ ndụ, akụkọ ọdịnala na eserese nke ndụ
Maria onyekwere | 29/04/2021 12:00 | Akụkọ, omenala
Akụkọ ndụ, akụkọ ọdịnala na ihe ncheta ha na-edubata anyị n'ime eserese ezinụlọ nke na-anaghị ezukarị oke, adịghị ike mmadụ na mmekpa ahụ, omenala obodo na ọdịnala oge ochie nke obodo… Yabụ, anyị na-achọpụta ndị protagonị dị iche iche iche iche nke anyị chere na anyị maara ma amaghị.
Anyị emeela njem katalọgụ ndị nkwusa dị iche iche na-achọ akwụkwọ edemede akwụkwọ dabara adaba na ngalaba a ma anyị achọtala ọtụtụ karịa ka anyị nwere ike ịtụnye. Ha abụghị ihe niile ha bụ, mana ọ bụrụ na anọchiri anya ha, ma ọ bụ yabụ anyị gbalịrị, echiche dị iche iche na isiokwu dị iche iche.
1 Agwabeghị m ogige m
2 Nne Ireland
3 Nna m na ụlọ ihe ngosi nka ya
4 Svetlana Geier, ndụ n'etiti asụsụ
Agwabeghị m ogige m
Onye edemede: Pia Pera
Onye nkwusa: Errata Naturae
Ogige mara mma na Tuscany: agụụ, mmụta, ebe iguzogide. Nrọ, nke onye edemede Pia Pera nwere ike mezuo site na ugbo a gbahapụrụ agbahapụ: ọ na-edozi ụlọ ahụ na-agbanwe ya ka ọ bụrụ ụlọ jupụtara na akwụkwọ, eserese na arịa ụlọ; otu o sila dị, o jisi ike tinye aka na ubi mkpụrụ osisi gbara ya gburugburu, juputara na ahịhịa ọhịa nke na-aga ebe ahụ maka ikuku na nnụnụ. Ọtụtụ narị ụdị okooko osisi, osisi na akwụkwọ nri nyere ya ụdị ọhịa nke usoro ụzọ ole na ole nyere iwu.
Otu ụbọchị, onye edemede ahụ chọpụtara nke ahụ ọrịa na-enweghị ọgwụgwọ na-eji nwayọọ nwayọọ eburu ya. N'ibibi mbibi nke ahụ ya, jiri nwayọọ nwayọọ gbochie nkwarụ nke osisi, ogige ahụ, ebe ahụ ebe ndụ na-eto eto na ebe "mbilite n'ọnwụ" na-eme, ghọrọ ebe mgbaba ya. Ka ị na-atụgharị uche na ya, ị na-enwe nkekọ ọhụrụ na okike ma na-enye echiche miri emi ma na-akpali akpali banyere nzube nke ndụ. Onye edemede ahụ na-ege ntị ma na-ege onwe ya ntị, na-akọkwa ihe na-eme n'oge ọ gara nleta n'ụlọ ọgwụ, echiche ndị na-awakpo ya n'abalị, akụkụ ndị na-eso ya ma na-akasi ya obi ... kwụsị inwe mmasi na ịdị nro maka ihe niile gbara ya gburugburu na nke mere ka ịdị adị ya dị mma mgbe niile: ọ bụghị naanị okooko osisi na nnụnụ na-ejupụta n’ubi ya, kamakwa ụlọ ọrụ nke nkịta ya, ndị enyi ya, akwụkwọ, gastronomy ... «Ugbu a ihe niile bụ dị ọcha ma dị mfe ịma mma », na-ekpughe anyị.
Onye edemede: Edna O'Brien
Onye nkwusa: Lumen
Ireland abụrụla nwanyị, akpa nwa, ọgba, ehi, Rosaleen, ịgha, enyi nwanyị, akwụna ...
Onye edemede mmeri nke Country Girls weputara akụkọ banyere onwe ya - oge nwata ya na County Clare, ụbọchị ya n'ụlọ akwụkwọ ndị nọn, nsusu ọnụ mbụ ya, ma ọ bụ ụgbọ elu ya na-aga England - na isi nke Ireland, ala akụkọ ifo, uri, nkwenkwe ụgha, oge ochie Omenala, amamihe a ma ama na oke mma. Mama Ireland bụ, dị ka The Guardian si kwuo, “Edna O'Brien kachasị mma. Ihe ndekọ na-akpali akpali ma mara mma banyere gburugburu ebe obibi na ndi bi na ya, juputara n’egwu na amam-ihe.
Nna m na ụlọ ihe ngosi nka ya
Onye edemede: Marina Tsvietáieva
Onye nkwusa: Cliff
Marina Tsvetaeva dere akụkọ ndekọ onwe a n'oge ije biri na France wee bipụta ya n'asụsụ Russian, na 1933, na magazin dị iche iche na Paris; afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, na 1936, na-agbalị ịbịaru ndị na-agụ akwụkwọ French nso, ọ gụgharịrị ncheta oge ọ bụ nwata na French, otu isi nke ise nke ọ kpọrọ Nna m na ụlọ ngosi ihe nka ya na nke agbanyeghị ebipụta n'oge ndụ. Na nsụgharị abụọ gbakọtara na olu a onye edemede na-enye a Mkpali mmetụta uche na nke mmụọ nke ọnụ ọgụgụ nna ya, Ivan Tsvetaev, onye prọfesọ mahadum nke tinyere ndụ ya na ntọala nke Moscow Museum of Fine Arts, Pushkin Museum ugbu a. Ọtụtụ mgbe, ọ na-abụ nke a na-akọwasị ma na-agbasa ma na-eji ike uri pụrụ iche, ihe odide a magburu onwe ya, nke na-akpali akpali ma na-akpali akpali, na-eme ka anyị bịaruo nso nke onye na-ede uri na-enweghị atụ karịa mmadụ ole na ole.
Svetlana Geier, ndụ n'etiti asụsụ
Onye edemede: Taja Gut
Onye nkwusa: Tres Hermanas
Ọ bụrụ na ndụ tozuru ntozu nke "ihunanya" ọ bụ nke onye ntụgharị okwu Svetlana Geier. Amụrụ na Kiev na 1923, ọ nọrọ oge nwata ya n'etiti ụfọdụ ndị ama ama ama ama na obodo ya. Nsacha nke Stalinist kwụsịrị ndụ nna ya, emesia, n'oge ọchịchị German, ọ hụrụ ịkpa arụ ndị Nazi n'ụdị ya kachasị ọbara. N'ihi ọgụgụ isi ya na ọpụrụiche dị mkpa nke na-enweghị atụ, Geier ga-emesịa bụrụ onye nsụgharị kachasị amị nke akwụkwọ Russia na German nke narị afọ nke XNUMX Nsụgharị ọhụrụ nke akwụkwọ ọgụgụ ise dị ukwuu nke Dostoevsky bụ ọrụ titanic nke o jiri kpuchie ya ndu ije ozi na ntughari akwukwo. Ọmarịcha akụkọ ndụ na-agụnye ọtụtụ ajụjụ ọnụ nke onye editọ na onye ntụgharị okwu Taja Gut mere na Svetlana Geier n'etiti 1986 na 2007.
Onye edemede: Emmanuel Carrère
Onye nkwusa: Anagrama
Yoga bu akuko n’onye mbu na enweghi nzobe nke ịda mbà n'obi miri emi na ọchịchọ nke igbu onwe nke mere ka onye edemede ahụ nọrọ n'ụlọ ọgwụ, chọpụta na ọ nwere ọrịa bipolar ma gwọọ ya ọnwa anọ. Ọ bụkwa akwụkwọ gbasara nsogbu mmekọrịta, gbasara nkụda mmụọ na nsonaazụ ya. Banyere iyi ọha egwu Islamist na ihe nkiri nke ndị gbara ọsọ ndụ. Ee ee, n'ụzọ ọzọkwa gbasara yoga, nke onye edemede dere kemgbe afọ iri abụọ.
Onye na-agụ ya dere n’aka Emmanuel Carrère na Emmanuel Carrère nke e dere n’ụdị Emmanuel Carrère. Nke ahụ bụ, na-enweghị iwu, na-awụli elu na oghere na-enweghị ụgbụ. Ogologo oge gara aga, onye edemede ahụ kpebiri ịhapụ akụkọ ifo na corset nke ụdị. Na nke a na-egbuke egbuke na n'otu oge ọrụ na-agbawa obi, akụkọ ọdịnala, edemede na akụkọ gbasara akụkọ akụkọ. Carrère na-ekwu maka onwe ya ma na-agakwa otu n in ime n in ime nchqcha ya banyere oke d [n the ide q kwx.
N'ime ndụ mmadụ ndị a, olee nke ị ga-ebu ụzọ gụọ? Gụbeghị? O doro m anya na m ga-ebido na "Agwabeghị m ogige m", mana amaghị m nke nke akụkọ ndụ ndị ọzọ m ga-agbaso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Akụkọ banyere akwụkwọ: akụkọ ndụ, akụkọ ọdịnala na eserese nke ndụ
Esi ewepu waatị
Hazie ụlọ gị na usoro 20/10, mara ihe ọ mejupụtara